သရဖူသကျသခေံနှင့်ပြည်နယ်နှင့် proxy ရာဇဝတ်မှု (ရှေ့နေ Meijering နှိုင်းယှဉ် Plasman) အကြားဂိမ်း: မာတင် Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ 11 2019 အပေါ်	• 8 မှတ်ချက်
ရင်းမြစ် - telegraaf.nl (ဘယ်လ်စမန်း၊ ဘယ်ဘက် Meijering)
ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့က Financieel Dagblad ရှိ Ficq & Partners ရုံးမှရှေ့နေ Nico Meijering နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။FD.nl) ။ Nico Meijering အကြောင်းအရင်ရှင်းပြပါ ဦး ။ ကျွန်တော့်အထင်တော့၎င်းသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ PsyOp ရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကယူဆဖို့ခက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးလေ့လာဖို့အရေးကြီးတယ်။ တရားသူကြီးများ၊ ရှေ့နေများ၊ အမြင်အာရုံမန်နေဂျာများ၊ တီဗီနှင့်သတင်းစာနှင့်မီဒီယာနှင့်အခြားမီဒီယာတို့တွင်ပါ ၀ င်သောပြည်နယ်သည်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးများမှတဆင့်လူတို့အားကစားခြင်း (PsyOps နှင့်အတိုကောက်) ဖြစ်နိုင်ပါမည်လား။? PsyOps သည်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုသေချာစွာကွပ်ကဲသည်။
လူတော်တော်များများကအဲဒါကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအဖြစ်ထုတ်ပစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်လျှို့ဝှက်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လူကြိုက်များမှုကိုထောက်ပြချင်ပါတယ်။ သူတို့နာမည်မှာ“ လျှို့ဝှက်” အရည်အသွေးအမှတ်အသားတောင်ရှိတယ်။ အခန်းတွင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းများဖြင့်လူတိုင်းလှည့်ကွက်များနှင့်လှည့်စားခြင်းကိုသတိပြုရန်လိုသည်၊ အောက်ခြေလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီကသမိုင်း၌မိမိကိုယ်ကိုနှစ်ခြင်းခံခဲ့သူမည်သူမဆိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က 65 တွင်ပါ ၀ င်သူသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်သွေးကြောများသည်မီဒီယာများဖော်ပြသည်ထက်ပိုမိုစွမ်းအားရှိသည်ဟုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ဖူးသည်။ မီဒီယာများအဆိုအရတော်ဝင်အိမ်များသည်အဓိကအားဖြင့်ဖဲကြိုးများဖြစ်ပြီးလှပသောရထားများဖြင့်စီးနင်းလေ့ရှိပြီးလူများကိုလည်းမကြာခဏနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ကောင်းပြီ၊ တခါတရံမှာသူတို့ဟာနိုင်ငံတကာသံတမန်ရေးရာလုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်တခါမှာတော့သူတို့မှာအာဏာသိပ်မရှိဘူး။ ဒီကိစ္စကိုပိုပြီးအလေးအနက်ထားစလေ့လာမှသာဒီပုံကိုမီဒီယာတစ်ခုတည်းကတဆင့်သင်၏ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အမှန်တကယ်အာဏာသည်အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီသည်လူထုအတွက်ရွေးချယ်မှု၏ထင်ယောင်ထင်မှားကိုကိုင်တွယ်ရမည့်မျက်နှာဖုံးတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအရိပ်အာဏာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်သောထိုလျှို့ဝှက်ချက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ထိပ်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိနေသောဤမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များဖြစ်သည်။ ပညာရေးနှင့်မီဒီယာများအနေဖြင့်ကမ္ဘာကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်စားပြုသည်၊ ထိုရောင်စုံရုပ်ပုံပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မနက်တိုင်းငါတို့ဘာတက်လာတာလဲ။ ရေဒီယိုပေါ်ရှိသတင်းများသို့မဟုတ်နံနက်ခင်းများ DJ များပုံပြင်များနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့သတင်းနှင့်သတင်းစာနှင့်ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့်အတူထ။ နာရီဝက်အကြာမှာငါတို့အလုပ်ရောက်လာပြီးရေဒီယိုကငါတို့ရဲ့သတင်းကို“ နာရီ” မှာကြားရတယ်။
ညနေနှောင်းပိုင်းအထိကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်မှန်၏ပုံသဏ္influာန်ကိုသြဇာညောင်းသည့်ချောင်းများဖြင့်ရောင်စုံထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာကိုမသိကြပါ။ ကောင်းပြီ၊ သင်လုပ်မှာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာကိုဖတ်ရှုပြီး Thierry Baudet ကိုလိုက်နာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအတွေးကိုခဏမျှစဉ်းစားပါ၊ အတိုက်အခံများသည်ပါဝါအိတ်ကပ်ထဲ၌ရှိကောင်းရှိနိုင်မည့်အလားအလာကိုညွှန်ပြသည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးပါသလား။ နှစ် ဦး စလုံးပါတီများသရုပ်ဆောင်နှင့်အတူဆန္ဒပြပွဲများကိုမည်သို့မည်ပုံပြသခဲ့သည်ကိုပြသရန်ဗီဒီယိုအထောက်အထားများဖြင့်သင်ထောက်ခံသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရှိပါသလား။ အလံလွှင့်ထူသည့်လုပ်ငန်းအတုများအပြင်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထောက်ပြသည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိခဲ့ဖူးပါသလား ရုပ်ရှင် scripts ကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံမူအပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး? ၎င်းသည်၎င်းတည်ရှိခြင်းမရှိသောဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုလောသို့မဟုတ်အတိုက်အခံပြုမှုကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို၎င်းအားစနစ်တကျလွှဲပြောင်းထားသည့်လက္ခဏာတစ်ခုလား။ သူတို့က၎င်းကိုခေါ်သောသူတို့အားတိတ်ဆိတ်စွာနေသင့်သလော။ သင် "မည်သူမျှသတင်းပို့မည်ဆိုလျှင်မမှားပါစေ" ဟုသင်ထင်မြင်နိုင်မည်လား။
အစိုးရများအနေဖြင့်ပါဝါပိတ်ပင်တားဆီးမှုအသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုရယူရန်အတွက်တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရန်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် proxy armies များကိုကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားသော alibi တစ်ခုရရှိရန်ရန်ပုံငွေများကိုစဉ်းစားဖူးပါသလား။ များစွာသောသူတို့သည်ဤအရာသည်စီအိုင်အေ၏ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည့်နည်းဗျူဟာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အယ်လ်ကိုင်းဒါးစာသားသည် 'ဒေတာဘေ့စ်' ကိုဆိုလိုသည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာရှိတဲ့ရုရှားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမေရိကန်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးလက်နက်ကိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဒေတာဘေ့စ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်။ ဒါက proxy ကိုစစ်တပ်သည်၎င်း၏အမည်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယခုအခါ၎င်းကိုနောက်ဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမည် (ISIS သို့မဟုတ် Daesh ဟုလည်းခေါ်သည်) အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိရှိပြီဖြစ်သည်။ အဲဒီတိုက်လေယာဉ်အားလုံးကဘယ်ကလဲလို့ခင်ဗျားထင်သလဲ Jeroen Pauw နှင့်သူ၏စားပွဲတင် guests ည့်သည်များကဲ့သို့သောအမြင်မန်နေဂျာများမှတစ်ဆင့်မီဒီယာများကသင့်အားစစ်သားစုဆောင်းသောတိုက်လေယာဉ်များအားဆီးရီးယားသို့သွားရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟုထင်မြင်စေခဲ့သည်။ အဲ့ဒီ proxy armies တွေကိုကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်ဖြည့်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ, သင်နှင့်ငါမဟုတ်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှု ၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ထင်မြင်ချက်ကိုပေးသင့်သည့်ဖုံးကွယ်ထားသောမီဒီယာပုံပြင်များနောက်ကွယ်မှဖုံးကွယ်ထားသည့်ဖုံးကွယ်နေသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်နေသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရှုရိလူဖြစ်ကြ၏။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမာစတာဇာတ်ညွှန်း (ငါ့၌ဖော်ပြထားသည်) ၏ pawn တစ်ခုအားအတိုချုပ်ရှင်းပြထားသည် အသစ်သောစာအုပ်); ဆီးရီးယား၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောအာဏာရှင်။ (ဗီဒီယိုအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ)
ကောင်းပြီ, 'မျက်စိနှင့်တွေ့ဆုံထက်ပို' 'ရှိ၏ ဒါမှမဟုတ်လည်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့ပုံသဏ္largelyာန်ကိုမီဒီယာနှင့်အခြားမီဒီယာများကအကြီးအကျယ်ဆုံးဖြတ်သည်။ အကယ်၍ အစိုးရများအနေဖြင့် proxy armies များဖွဲ့စည်းနိုင်သည်ဆိုပါကအစိုးရအနေဖြင့်အချို့သောအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် proxy ရာဇဝတ်မှုများပြုလုပ်နိုင်မလား။ မင်းစဉ်းစားလို့ရမလား Heineken ပြန်ပေးဆွဲမှု၏ရုပ်ပုံများကိုသင်အမှန်တကယ်ဝေဖန်ခဲ့ဖူးပါသလား။ သူတို့ကို YouTube မှာပြန်ကြည့်ဖူးလား။ ကောင်းပြီ၊ နောက်ကြည့်ပါ (ထို့နောက်ဗီဒီယိုအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ပါ။ )
နောက်လှည့်ပြန်ကြည့်ရင်မင်းဒီမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းကိုကိုင်တွယ်နေတယ်လို့ခံစားမိလား။ "အိုးဘာအနတ္တ Vrijland ။ နယ်သာလန်မှာငါတို့နှင့်မတူဘူး။ သူတို့ကိုမင်းကအကြွေးအများကြီးပေးတယ်။“ တာယာအထူးကုသည်သွားလမ်းများပေါ်တွင်လက်သည်းများကိုလှဲချလျှင်၊ မီဒီယာ၊ နိုင်ငံရေး၊ ရဲနှင့်တရားစီရင်ရေးသည်ဥပဒေအသစ်ကိုကျင့်သုံးရန်ကြားခံရာဇ ၀ တ်သားများမှတဆင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျှင်ကော။ ၎င်းအတွက်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအဓိကအမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာအကျိုးသက်ရောက်မှုပြproblemsနာများလိုအပ်သည်။ လူအများစုကြားစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုများစွာလှုံ့ဆော်ပေးသောအရာ။ Pauw ကဲ့သို့သောဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်များတွင်သင်လူအများကြားမကျေနပ်မှုနှင့်ခံစားချက်များကိုတိုးပွားစေရန်သင်တင်ပြသောအရာ။ ထို့နောက်သင်သည်လူများအားပုံမှန်အားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအရာအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောဥပဒေဟုလက်ခံထားသော ၀ ိညာဉ်ရေးရာပုံစံသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်။ Proxy ရာဇဝတ်သား Holleeder ၏အမှု၌၎င်းသည်ဥပမာအားဖြင့် 'သရဖူသက်သေ' ၏နိယာမကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တရားစီရင်ရေးနှင့်သဘောတူညီမှုအတွက်လဲလှယ်နိုင်သည်။ သရဖူသကျသခေံရာဇဝတ်မှုဖိုင်ကိုပင်မြင်စေခြင်းငှါထို့ကြောင့်အမှန်တကယ်စိတ်ကြိုက်သက်သေခံချက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်သူသည်မျက်နှာအသစ်ကိုရရန်ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်သို့သွားပြီး (ယူဆရသော) အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ဖြင့်ထွက်ခွာနိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ မင်းဟာ proxy criminals တွေနဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုအနေနှင့်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒီဥပဒေသစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ခုခံမှုကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်၊ PsyOp ရဲ့တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ဆန့်ကျင်နေတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူကိုထပ်ပြီးအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ အမှန်ပင်ရှိပါသည် ကောင်းစွာ တိုင်းပြည်တွင်ရိုးသား။ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သောစစ်မှန်သော (PsyOp မဟုတ်သော) ရှေ့နေများနှင့်သူတို့ကိုသရဖူသကျသခေံနိယာမကိုသင်ယုံကြည်ရန်လိုသည်။
ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဟာ proxy ရာဇ ၀ တ်သားတစ်ယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ မီဒီယာမှာလူသတ်မှုနဲ့လူသတ်မှုအမျိုးမျိုးရှိကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပန်း ဦး ရစ်သရဖူကို၏သက်သေခံချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတရားစွဲဆိုပြီးတော့သင်ကသေချာနိုင်ပါတယ် ၏ရှေ့နေ ထိုသို့သောသရဖူကိုသက်သေခံ၏အသေခံသည်။ ထို့နောက်သင့်တွင်စံပြ PsyOp ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းရှိသည်၊ ၎င်းတွင်လူအများ (နှင့်တရား ၀ င်အလုပ်အမှုဆောင်) မှမျက်မြင်သက်သေမျက်မြင်သက်သေ၏လက်ခံမှုကို ထပ်မံ၍ အသေအချာ နှိပ်၍ အကာအကွယ်အစီအစဉ်များအတွက်ငွေကိုဖွင့်ရန်လက်ခံမှုပုံစံကိုသင်ဖန်တီးသည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် proxy ရာဇဝတ်သားများနှင့်အရာအမျိုးမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Holleeder အချိုပွဲတွင်ကြာရှည်ခံသောမုန့်၏ထိတွေ့မှု။
Meijering နည်းတူ Plasman သည် TV အစီအစဉ်များကိုပုံမှန်ပါဝင်သည်။ အောက်တိုဘာလတွင်သူသည်အပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွင်ငွေကြေးအထောက်အပံ့အတွက်တရား ၀ င်အကူအညီများကိုရှေ့နေများကနှစ်ပေါင်းများစွာရုံးတင်စစ်ဆေးမှုများတွင်ထိပ်တန်းရာဇ ၀ တ်သားများထံမှအကူအညီများကိုစားခဲ့သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သန်းပေါင်းများစွာသော Holleeder လုပ်ငန်းစဉ်သည်“ လုံးဝထပ်မံဖြည့်တင်း” ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် proxy ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေလုပ်ခဲ့သမျှဟာအနာဂတ်မှာတရားမျှတတဲ့တရား ၀ င်အကူအညီလိုသူတိုင်းကိုထိပုတ်ပါ။ အသုံးဝင်သောထို proxy ရာဇဝတ်ကောင်!
ထိပ်တန်းရှေ့နေများအကြားစစ်ပွဲ (ဥပမာ Telegraaf ကသူတို့ကိုခေါ်သည်) Meijering နှင့် Plasman သည်ကျွန်ုပ်သိထားသလောက်အရသက်သေအထောက်အထားနှင့်ဆက်စပ်သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များကိုအပြည့်အ ၀ လက်ခံခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် PsyOp ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ့ကုန်ကျစရိတ်များအစရှိသဖြင့်ရှေ့နေများ၊ စာနယ်ဇင်းသမားများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်တိုးချဲ့သင့်သောအကာအကွယ်အစီအစဉ်များ။ သရဖူသကျသခေံ၏နိယာမကိုကာကွယ်ရန်ပြည်နယ်ဘဏ္treာရေးကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်သဖြင့်ပြည်သူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်မြင့်မားသောအားထုတ်မှုများကိုပြုလုပ်ရမည်။ ကာကွယ်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးချနိုင်ရန်အတွက်တရား ၀ င်အလုပ်အကိုင်သည်သရဖူသကျသခေံ၏နိယာမကိုလက်ခံရန်လည်းယုံကြည်ရမည်။ ဤအတောအတွင်းတရားခံ၏ကာကွယ်ရေး (ထို့အပြင်နှင့်အတူ) skimped ရမည်ဖြစ်သည်။ PsyOp ရှေ့နေ (၂) ယောက်ကိုအလုပ်ခန့်ထားခြင်းဖြင့်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ထိုမြင့်မားသောအကျိုးအမြတ်ကိုသင်ရနိုင်သည်။ တ ဦး မှာသရဖူမျက်မြင်သက်သေများနှင့်အခြား proxy ရာဇ ၀ တ်သားများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဒီမှာထဲမှာနှစ်ခုအကြားတုန်လှုပ်စေသော jitters ကြည့်ပါ ဘဏ္ဍာရေး Times သတင်းစာ.
Mocro Mafia သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် AIVD ၏အယ်လ်ကေးဒါးလား။ ၎င်းသည် proxy ရာဇဝတ်မှုလား။ Holleeder ဟာ proxy ရာဇ ၀ တ်မှုလား။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် proxy ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ဆက်ဆံနေပါသလား။ Holleeder သည်အာဂျင်တီးနားတွင်ကော့တေးကိုနှစ်သက်ပါသလား။ Ridouan Taghi တည်ရှိသလား၊ deepfake လုပ်ဖို့လား Telegraaf အဆောက်အအုံနှင့် Panorama အဆောက်အအုံကိုတိုက်ခိုက်မှုအားလုံးသည်တကယ်ပဲဟုတ်ရဲ့လား။ Derk Wiersma တကယ်ရှိခဲ့သလား၊ ကျွန်ုပ်တို့သိသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်မီဒီယာများသည်ပုံပြင်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သို့စည်းရုံးနိုင်မည်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအားလုံးသည်မီဒီယာကိုကြိုတင်မြင်ထားသည့်အဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်။ Nico Meijering ကဲ့သို့သောဇာတ်လမ်းများသည် (PsyOp ရှေ့နေ၏) သရုပ်ဆောင်အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ Meijering နှင့် Plasman သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ PsyOp ရှေ့နေများ၏လူသိများသောအဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ပါသလား။ အထွေထွေဒတ်ခ်ျစာနယ်ဇင်းရုံး (ANP) ကို John de Mol ၏လက်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူများအား PsyOps နှင့်လှည့်ဖြားရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်သတင်းအတုသတင်းများကိုလူမိုက်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေနှင့်နည်းလမ်းအားလုံးအားအနည်းဆုံးပြောနိုင်သည်။
အားလုံးအရေးကြီးသည်မှာယခုမှ စ၍ သရဖူသကျသခေံဖွစျစခွေငျးအားဖွငျ့လူတိုငျးကိုပိတျထားနိုငျသညျ၊ လူများ gulag အတွက်အလွယ်တကူပျောက်ကွယ်သွားနိုင်အောင်, တစ် ဦး စိတ်ကြိုက်သက်သေခံချက်ပေးသူတစ် ဦး သရဖူသကျသခေံ။ Meijering နှင့် Plasman သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏တရားဝင်အလုပ်အကိုင်ကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုအရဤအလုပ်ကိုသက်ရောက်သောနောက်ဆုံး PsyOp တွင်ကစားခြင်းဖြင့်စည်းရုံးနိုင်မည်လား။
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်စာအုပ်အသစ်ကို "ငါတို့ရိပ်မိနေသည့်အဖြစ်မှန်" မှာမှာပါ။
source link ကို entries တွေကို: merriam-webster.com, telegraaf.nl (ဂူဂဲလ်ခရုမ်းတွင် incognito စနစ်ဖြင့်ဖွင့်ပါ), fd.nl
ရိုက်နှက်မှုရှေ့နေ Philippe Schol နှင့်မှားယွင်းသောပြန်ပေးဆွဲမှုအစီရင်ခံစာ Schiphol
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် '' ညာဘက် '' နှင့်ဂရုတစိုက်စီစဉ်ထားစျေးကွက်မဟာဗျူဟာအမည်းစက်
Tags:: &, သရုပ်ဆောင်များကို, ရှေ့နေ, ရှေ့နေများ, မှု, ရာဇဝတ်ကောင်, deepfake, fd.nl, အထူးပြုလုပ်ထားသော, Ficq, သရဖူသကျသခေံ, မာဖီးယား, မီထရို, မိုက်ခရို, မိတ်ဖက်, Plasman
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 15: 45
"သရဖူသကျသခေံ" ၏နိယာမအမှန်တကယ်လျှို့ဝှက်မျက်မြင်သက်သေများဝန်ခံဆိုလိုသည်။ တည်ရှိမှုမရှိသူတစ် ဦး ကသင့်အားတစ်စုံတစ်ရာကိုသင့်အားစွပ်စွဲနိုင်သည်။ တောင်မှတက်စေနိုင်သည်။ ရှေ့နေကောင်းတစ်ယောက်ရှိသေးသလား။ ရှာဖွေချင်သူများသည်ကောင်းမွန်သောစကားပြောဆိုရန်အတွက်ရှေ့နေများ၏အမိန့်၏ဌာနမှူးသို့တိုက်ရိုက်လာနိုင်သည်။ အဲဒီမှာသူကပြောတယ်၊ ဂိမ်းကစားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းကခက်ခဲတယ်လို့ထင်ရလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့တိတ်ဆိတ်သိမ်မွေ့သန့်စင်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်မတိုင်မီငါကပြောသည်။ အုပ်စုဖိအားသည်အလွန်ကြီးလွန်းသဖြင့်လူတိုင်းနီးပါးသည်ဤအာဏာရှင်စနစ်တွင်ပါ ၀ င်ကြသည်။ မုန့်ဖုတ်ချင်တဲ့မုန့်ဖုတ်သမားကဒီအာဏာရှင်စနစ်ထဲမှာလည်းမုန့်ဖုတ်တယ်။ ရဲတစ်ယောက်ကိုကစားချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကဒီအာဏာရှင်စနစ်မှာဒီလိုလုပ်တယ်။
အကြှနျုပျ၏အစွန်အဖျားရှေ့နေများယုံကြည်စိတ်ချမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဖိအားပေးခံရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအရာရာကိုပြည်နယ်ကိုပြောပြပြီးသင်ထင်တာထက်ပိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြည်နယ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 17: 39
အတိအကျ ... ငါပြီးသားအများအပြားဆောင်းပါးတွေထဲမှာရှင်းပြပြီးပါပြီ။
ဒါဟာ gulag ဥပဒေပြဌာန်းသည်နှင့်အတိုက်အခံများကိုထိန်းသိမ်းရေးမကြာမီကိတ်မုန့်တဖဲ့အပိုင်းအစဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ရဲများသည်ရှေ့တံခါးပေါက်တိုင်းကိုရှာဖွေခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ (Ruinerwold PsyOp မှကျေးဇူးတင်ပါသည်) နှင့်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသူ (Thijs H. PsyOp ကိုကျေးဇူးတင်) မပါဘဲရှေ့တံခါးနောက်ဖက်ကိုကြည့်ခွင့်ပြုလျှင် အကယ်၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတက်လှမ်းနိုင်သည်။
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 15: 51
Heineken သည်သူ၏ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူပုန်းအောင်းနေသည့်နေရာတွင်ရဲများကမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ကိုမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်ပါစေ။ အဲဒါကို Petertje de Vries ရဲ့စာအုပ်မှာတွေ့နိုင်တယ်။ သူသည်ပြည်နယ်အတွက်လျှို့ဝှက်စွာအလုပ်လုပ်မည်လား။ မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်း။
ပြည်နယ်များအတွက်ပတေရု R. က de Vries? အဘယ်သူမျှမ dude .. သင်အဲဒီမှာဘယ်လိုရကြ !!
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 21: 28
A script = script တစ်ခု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏မသမာ, soulless သစ္စာဖောက်။ မင်္ဂလာညနေခင်းအမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းချစ်ခင်ရပါသောခရီးသွားများအတွက်
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 19: 22
မိဘများလည်းသတ္တိရှိရှိပါဝင်ဆောင်ရွက်။ Sinterklaas (ဒတ်ခ်ျစန်တာ / စာတန်) ဇာတ်လမ်းကိုစဉ်းစားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအသက်အငယ်ဆုံးသို့အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောကမ္ဘာနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်။ ပျော်ရွှင်စရာအားလပ်ရက်များ😳😉
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 21: 05
12 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 12: 56
ရလဒ်တစ်ခုရရန်အတွက်ထင်သာမြင်သာသောမှားယွင်းသောထင်မြင်ချက်များကိုဖန်တီးခြင်းသည်သာမန်သံသယရှိသူများ၊ ဇာတ်ညွှန်းမှလူတို့၏ဝါသနာဖြစ်သည်။ သူတို့ကယုံလွယ်သောသိုးကိုဒဏ္theာရီသတင်းစာသစ်တောသို့လှည့်စားရုံမျှဖြင့်မရနိုင်ပါ။
« ပထမအဆင့်မှာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့်သည်ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည် - ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းခလုတ်
စီးနင်းမှုများစတင်ခဲ့ပါသလား Psycholance ကို Els Borst / Bart van U. ကိစ္စတွင် အခြေခံ၍ 2018 ၌အစိမ်းရောင်အလင်းကိုပေးထားပြီးဖြစ်သည် »
ဇူလိုင် 2017 BY V ည့်သည်များ
ကုလသမဂ္ဂ၏အစီအစဉ် 2030 ကိုနားလည်ရန်သမိုင်းကိုသိထားပါ
guppy op နိုင်ငံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်လည်ပညာသင်ကြားရေးစခန်းများတည်ဆောက်ရန်အဆိုတင်သွင်းသည်။
XanderN op ကလေးများအပေါ်ဖိအားပေးမှုသည်အလွန်ကြီးမားသည်။
မာတင် Vrijland op ကလေးများအပေါ်ဖိအားပေးမှုသည်အလွန်ကြီးမားသည်။